FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MPIANDRY HOLANDEY SY SARY - ALIKA
Fampahalalana momba ny fiompiana alika mpiandry holandey sy sary
Mpiandry ondry holandey — Aura (Aurelia, 7,5 taona) sy Mira (Kyara Hasse v.d. Dorestee, efa ho 1 taona), sary natolotr'i Heleen Klinkenberg
Lisitry ny alika mpiompy holandey
Ny mpiandry ondry holandey dia misy karazany telo: lava-lava (lava, mahitsy, fisaka ary masiaka), fohy volo (somary mafy, tsy dia fohy) ary volo tariby (lava salantsalany - henjana sy misavoritaka - mifono olioly kokoa noho ny mifono tariby) . Ny fanamarihana fotsy mavesatra amin'ny tratra sy ny tongotra dia tsy faniry amin'ny peratra fampisehoana. Na dia miovaova aza ny karazana palitao, dia mitovy ihany ny azo anaovana loko: ny brindles isan-karazany amin'ny volon'ny volamena sy volafotsy ary ny brindle misy tsipika mainty. Blue brindle koa dia voatanisa ao ambanin'ny karazana marokoroko matevina. Ny volo fohy dia fahita indrindra any Hollande, raha ny volo lava kosa tsy dia fahita firy ary ny karazam-bolo vita amin'ny tariby amin'izao fotoana izao dia misy mponina ambany atahorana. Hentitra ny vatana fa tsy masiaka. Somary lava kokoa noho ny handrina fisaka ilay vavony. Mahery ny nify ary manaikitra manaikitra. Maizina ny maso, miendrika almond ary somary milentika ary avo sy mahitsy ny sofina salantsalany. Somary miolaka ny rambony. Lalina ny tratra ary somary nafenina ny kibo. Ny tongotra dia boribory lavalava miaraka amin'ny rantsan-tongotra mifamatotra tsara, hoho mainty ary pady mainty.
Misy fisafotofotoana raha toa ka misy andozy ny mpiandry Holandey. Loharanom-baovao marobe no milaza fa tsy izany, fa manana ando mando eo aloha tokoa izy ireo. Tsy manana lalànan'ny ando any aoriana izy ireo. Rehefa miresaka momba ny tongony aoriana dia nilaza ny fenitry ny karazany holandey 'Hubertusklauwen: niet aanwezig' izay adika hoe: 'Dewclaws: tsy misy.' Io teny io ihany 'hubertusklauw' dia tsy, na izany aza dia manondro ireo dewclaws eo aloha. Ny fanamarihana mahazatra indrindra amin'izany dia ny hoe 'duim' na mety hoe 'bijklauw.' Tsy misy teny manokana momba ny dewclaws aloha amin'ny teny Anglisy, ary izany no mety hiteraka fikorontanana, fa ny karazana dia manamboatra dewclaws eo aloha.
Ny mpiandry ondry holandey dia iray amin'ireo alika mpiandry ondry mahay indrindra amin'ny asa toy ny hazoto, haza, fifaninanana fankatoavana, asan'ny mpiambina , fiompy , fitsangatsanganana an-tsaha sy fiarahana. Mifamatotra amin'ny faritaniny, ary mpiasa mazoto, ity alika be fitiavana sy sambatra ity dia mpankato, mahonon-tena ary tena mahatoky amin'ny mpikarakara sy ny fianakaviany. Sariaka, be fitiavana, milalao ary be herim-po tokoa ity alika tena falifaly ity ary marani-tsaina. Ny ankizy omena dia hita ho mpitarika fonosana, mety ho sakaiza tsara amin'izy ireo koa izy ireo. Ireo mpitsidika tsy ilaina dia hajanona amin'ny lalany, raha ny sakaizan'ny fianakaviana efa fantatra kosa dia hohajaina amin-kafanam-po. Ny mpiandry ondry holandey dia mankafy ny fiarahana amin'ny karazany avy ary miara-miaina amin'ny biby hafa. Manan-tsaina, mora mankatò ary mazoto mianatra - mianatra didy vaovao mora foana izy ireo. Ity alika ity dia mahatonga alika mpiambina tena tsara. Mavitrika, velona ary mailo. Ny karazany fohy dia karazana mahazatra indrindra amin'ny fitsapana alika fiarovana / polisy. Tsy mila fikarakarana kely izy io ary mahazaka harerahana sy toetr'andro ratsy. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Satria a mifampiresaka ny alika ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Izay no fomba tokana ahafahan'ny fifandraisanao amin'ny alikao hahombiazana tanteraka.
Haavony: Vehivavy 21.5 - 23.5 santimetatra (55 - 60 cm)
Haavony: Lahy 22.5 - 24.5 santimetatra (57 - 62 cm)
Ny mpiandry ondry holandey dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Ny palitaony amin'ny toetrandro rehetra dia ahafahany manao tsara amin'ny toetrandro mangatsiaka.
Ireo mpiandry holandey dia mila tazomina roa fanatanjahan-tena ara-batana sy ara-tsaina . Mila mandeha an-tongotra na mihazakazaka isan'andro izy ireo, izay alehan'ny alika amin'ny sisiny na ao ambadiky ny olona mitazona ny firaka, satria ny voajanahary dia milaza amin'ny alika fa ny mpitarika no mitarika ny lalana, ary io mpitarika io dia mila ny olombelona. Satria te hiasa izy ireo, tantano amin'ny alàlan'ny fandavahana mahazatra farafahakeliny indroa isan-kerinandro. Mpinamana be amin'ny jogging izy ireo. Avelao ny alikanao hihazakazaka eo akaikin'ny bisikileta, na ento any anaty ala na any ambanivohitra misokatra izay ahafahany mihazakazaka mankamin'ny fony.
Na ny karazany lava na fohy dia samy mila fikolokoloana tsy tapaka miaraka amin'ny tohotra sy borosy hanalana ny volo maty sy malalaka. Ny akanjo lava volo dia tokony hongotana matihanina indroa isan-taona. Ny volo dia azo esorina amin'ny toerana vitsivitsy ho famaranana. Tokony hesorina ny volo be loatra amin'ny sofina. Ny karazan-doha volo tariby dia tsy tokony hosasana mihitsy, na dia milamina aza ny mikorisa raha antonony. Tora-droa matevina tokony hampiasaina foana. Mandrosoa ihany ny palitao amin'ny toetrandro rehetra raha tsy ilaina, satria hanala ireo menaka voajanahary ao amin'ny hoditra izany.
Ny mpiandry ondry holandey sy ny mpiandry ondry belza dia mizara fenitra mitovy amin'izany. Ny fahasamihafana dia kely amin'ny habe sy ny fitakiana fitoviana, ary koa mazava ho azy, lokon'ny palitao. Tahaka ny Belzianina, ny fiandohany dia mitoetra ao amn'ny alika mpiompy kaontinanta izay namorona ihany koa ny mpiandry ondry alemanina tamin'ny fotoana namoronana ny mpiandry belza sy holandey. Ny mpiandry ondry holandey sy ny mpiandry ondry belza dia tsaraina amin'ny fepetra takiana mahazatra ihany afa-tsy ny loko. Na dia lasa malaza any Etazonia sy any Eropa aza ireo mpiandry ondry belza mifandray amin'izany dia mbola tsy nahasarika mpanaraka marobe ny mpiandry ondry holandey. Na dia any Holandy aza, ny isan'ny mpiandry ondry holandey dia voafetra ary ambany dia ambany noho ny karazan-doha volo. Saika tsy fantatra ivelan'ny Holandy, ny Mpiandry Holandey dia sarobidy eo noho ny fahaizany mpiandry sy ireo reflexes haingana. Tamin'ny voalohany dia mpiambina tanjona, mpiompy, mpitaingina sarety, mpiambina, polisy ary alika mpiambina, ity karazana ity, amin'ny endriny palitao isan-karazany, dia nivoatra tamin'ny voalohan'ny taona 1800 tany amin'ny faritra atsimon'ny Netherlands, indrindra ny faritanin'i Brabant, ary any Belzika mpifanila vodirindrina aminy, izay anisan'ny Netherlands. Ny fizarazaran-tarehy dia nitranga rehefa nanomboka ny fampisehoana alika 100 taona lasa izay. Mahalana, ny alika zana-borona tsy misy brindle dia hita amin'ny karazana palitao rehetra, ary na dia mpiandry holandey aza izy ireo dia manana loko palitao tsy mahafinaritra ary voamarika toy izany amin'ny tetirazany. Ny fialana amin'ny fenitra tsara indrindra dia tokony horaisina ho lesoka, fa ny fahamatorana tokony hijerena lesoka dia tokony hitoviana amin'ny ambaratonga sy ny vokany eo amin'ny fahasalamana sy ny fiasan'ny alika.
Tin-Tin ilay mpiandry ondry holandey 3 taona— 'Tin-Tin dia tena tsy mivadika ary mpiaro tsara !!! '
Reggie the Dutch Shepherd amin'ny faha-6 volana
Aurelia (Aura) mpiandry ondry holandey, sary nahazoana lalana avy tamin'i Heleen Klinkenberg
brindle boxer volamena retriever mifangaro
Kyara Hasse vd Dorestee (Mira) mpiandry ondry holandey efa ho 8 volana, sary natolotr'i Heleen Klinkenberg
Buddy de Blauwe Pastorie ilay mpiandry ondry holandey volo, sary nahazoana lalana avy tamin'i Heleen Klinkenberg
Sjaantje v.d. Passchin ilay mpiandry ondry holandey volo, sary nahazoana lalana avy tamin'i Heleen Klinkenberg
Rodo-Rocky v.d. Samy nahazo ny mpiandry ondry holandey tsara indrindra tao amin'ny clubshow 2011 ny Shepherd Holandey volo volo. Photo courtesy of Heleen Klinkenberg
ny fako alika kely mpiandry holandey 3 herinandro fohy avy any Netherlands - ny alika voalohany eo ankavanana dia i Paul (ilay alika mitovy amin'ilay sary mivantana ambonin'ity iray ity).
I Sam dia toy ny alika kely 10 herinandro (anarana pedigreed: Aisal Lòmbre Accompagnant). Sam dia mipetraka any Alemana.
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ilay mpiandry ondry holandey
Sary mpiandry holandey 1
Sary mpiandry holandey 2
Sary mpiandry holandey 3
Sary mpiandry holandey 4
sarin'ny alika omby amerikanina
mpiandry aostraliana kely sy kilalao